Esports Baseball - Myanmar Sports
🎁 ESPORTS BASEBALL 🎁
Esports Bonus Calender ရဲ့ Esports Baseball ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ကစားပြီး
10% Cashback ကို ရယူလိုက်ပါ။
Esports Baseball ပရိုမိုးရှင်းကတော့ တစ်သင်းကို ၉ ယောက်စီပါဝင်တဲ့ အသင်းတွေ ယှဥ်ပြိုင်မယ့် ဘေ့စ်ဘော ပွဲစဥ်တွေမှာ လောင်းကြေးထပ် ကစားရမှာ ဖြစ်ပါ‌တယ်။
အလောင်းအစားများကို ပွဲမစတင်မီနဲ့ ပွဲစဉ်အတွင်း ( တိုက်ရိုက်အလောင်းအစားများ ) လက်ခံပါသည်။ ပွဲစဥ်အားလုံး တိုက်ရိုက်လွှင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းကာလ ( 02. 06. 2022 – 03. 06. 2022 ) ( 03:30 – 03:29 )
ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့၊ မနက် ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ် ( 02 June 2022 21:00 UTC ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့၊ မနက် ၃ နာရီ ၂၉ မိနစ် ( 03 June 2022 20:59 UTC ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ အချိန်ကာလာအားဖြင့် ( ၂၄ နာရီ ) အတွင်းသာ အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
ရရှိနိုင်သော အလောင်းအစား ပုံစံများ
၁။ ပုံမှန်ပွဲကစားချိန်အတွင်း အနိုင်
၃။ ဂိုးပေါင်း ( ဂိုးပေါ် ၊ ဂိုးအောက် )
၄။ အသင်းလိုက်ဂိုးပေါင်း ( ဂိုးပေါ် ၊ ဂိုးအောက် )
Team Totals (Over, Under)
ပွဲစဥ် ကြာချိန်ကတော့ ~ ၃၀ မိနစ်ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၁။ ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ ( register in the 1xBet promotion ) စာရင်းသွင်းမယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ပရိုမိုးရှင်း စာမျက်နှာကိုသွားပြီး “ Take part ” ခလုတ်ကို နှိပ်ရပါမည်။
၃။ ရွေးချယ်ထားသော ပွဲစဉ်များအတွက် ကမ်းလှမ်းချက်များအားလုံးသည် လက်ရှိတစ်နေ့တာ၏ မနက် ၀၃:၃၁ နာရီ မှ နောက်နေ့မနက် ၀၃:၂၉ နာရီ ( မြန်မာစံတော်
ချိန် ) ကြားတွင် အကျုံးဝင်ပါသည်။
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် (1xBet Baseball ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
၅။ Cashback နှင့်ပတ်သက်သော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
၆။ ဂိမ်းတစ်ခုတည်းရှိ စျေးကွက်တစ်ခုတွင် အလောင်းအစားများစွာကို လောင်းကြေးတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူပါမည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet Esports Baseball ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
၈။ ကတ်စတန်မာ အကောင့်၏ ငွေကြေးသည် ကမ်းလှမ်းချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ငွေကြေးအမျိုးအစားနှင့် ကွဲပြားနေပါက ပြန်အမ်းငွေ ပမာဏသည် ကတ်စတန်မာ၏ ငွေကြေးအမျိုးအစားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ( ဥပမာ – ကတ်စတန်မာ၏ ငွေကြေးက ဒေါ် လာ၊ ကမ်းလှမ်းချက် ဂိမ်းမှာက ယူရိုဆိုရင်၊ကတ်စတန်မာရဲ့ ငွေကြေးအတိုင်း ဒေါ်လာအနေနဲ့ ပြန်အမ်းငွေ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ )
၉။ ကျွန်တော်တို့ 1xBet သည် ဤကမ်းလှမ်းချက်ကို ပယ်ဖျက်ရန် သို့မဟုတ် ဆိုင်းငံ့ထားရန် သို့မဟုတ် အသိပေးချက် သို့မဟုတ် ရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲ ၎င်း၏စည်းကမ်းချက်များကို အချိန်မရွေးပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဤပရိုမိုးရှင်းတွင် အချို့သောအကောင့်ပိုင်ရှင်များကို ပါဝင်ခွင့်မပြုရန် သို့မဟုတ် ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသော ဆုံးဖြတ် ချက်ဖြင့် အချို့သောအကောင့်များမှ ခရက်ဒစ်ပေးသောဘောနပ်စ်များကို ဖယ်ရှားခြင်းမပြုရန်လည်း အခွင့်အရေးရှိသည်။
ရရှိနိုင်တဲ့ အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်
၁၀။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet Baseball promotion ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
၁၁။ တကယ်လို့ ကတ်စတန်မာ တစ်ဦးက ဤပရိုမိုးရှင်း၏ ရှုထောင့်တစ်ခုခုကို အလွဲသုံးစားပြုရန် သို့မဟုတ်၊ ကြိုးကိုင်ရန် ကြိုးပမ်းမှု သို့မဟုတ် ပရိုမိုးရှင်း စည်းမျဉ်းများကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းကတ်စတန်မာ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet esports baseball offer ) တွင် ပါဝင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၂။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နှင့်မဆို ကတ်စတန်မာများ၏ ငွေသွင်းငွေထုတ်မှတ်တမ်းများနှင့် (Log in) လော့ဂ်အင် မှတ်တမ်းများကို 1xBet ကုမ္ပဏီမှ ပြန်လည်သုံးသပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ထို့သို့ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီးနောက် ကတ်စတန်မာတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသော ကတ်စတန်မာများက ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကစားသည့် နည်းလမ်း မမှန်မကန်လုပ်သည်ဟု 1xBet မှ စုံစမ်းတွေ့ရှိပါက 1xBet သည် ထိုကဲ့သို့သော ကတ်စတန်မာများ၏ ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet esports 2022 promotion ) အတွက် ရပိုင်ခွင့်များကို ရုတ်သိမ်းပြီး ဘောနပ်စ် ( bonus esports 1xbet ) များကို ပြန်လည်ပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၃။ ကတ်စတန်မာများသည် ၎င်းတို့၏ အထောက်အထား (KYC) ကို အတည်ပြုရန် လိုအပ်ပါက အကောင့်အိုင်ဒီ စာရွက်စာတမ်းများ ပေးဆောင်ရပါမည်။ တောင်းဆိုလာစဥ် အဆိုပါစာရွက်စာတမ်းများကို ပေးပို့ရန် ပျက်ကွက်ပါက ဘောနပ်စ်နှင့် နိုင်ပွဲများ ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။ 1x bet သည် ကတ်စတန်မာတို့၏ အကောင့်အိုင်ဒီ ( account ID ) ကိုင်ဆောင်ထားသော ဓာတ်ပုံအထောက်အထားများ ( ကတ်စတန်မာ၏မျက်နှာကို ဓာတ်ပုံတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်ရပါမည်။ ) သို့မဟုတ် တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် သက်သေခံခြင်းအား လိုက်နာခံယူရန် အချိန်မရွေး တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၄။ ပရိုမိုးရှင်းရဲ့ စည်းမျဉ်းများ ( baseball rules ) ကို ပြောင်းလဲရန်၊ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်မရွေး ဆိုင်းငံ့ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၅။ အကယ်၍ 1xBet သည် လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် ငွေကြေး ခဝါချမှု ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက ကုမ္ပဏီသည် ကတ်စတန်မာ၏ အကောင့်ကို ပိတ်ပြီး အကောင့်ထဲရှိ လက်ကျန်‌ငွေကို ထိန်းသိမ်းပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
၁၆။ ကုမ္ပဏီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးကို ဤကမ်းလှမ်းချက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်အားလုံးတွင် နောက်ဆုံးအပြီးသတ်အဖြစ် မှတ်ယူရပါမည်။
၁၇။ အထက်ပါအချက်များသည် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ( best betting site ) လောင်းကစား ဝန်ဆောင်မှု၏ ယေဘူယျ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် အကျုံးဝင်ပါ
ပြန်အမ်းငွေ ဘယ်လို ရယူရမလဲ?
၁။ ပြန်အမ်းငွေ ( cashback ) ပေးသည့် ပမာဏသည် ကတ်စတန်မာတစ်ဦးက လောင်းကြေးထည့်သည့် ဂိမ်းအပေါ် မူတည်ပါသည်။
၂။ ပြန်အမ်းငွေသည် နောက်တစ်နေ့ အလုပ်ချိန်အတွင်း ကတ်စတန်မာ၏ အကောင့်ထဲသို့ ထည့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ကတ်ရှဘတ် ရရှိရန်အတွက် တစ်နေ့တာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဂိမ်းတွေကို မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ပြီး ပေါက်ကြေး ၁.၅ နှင့်အထက်ဖြင့် အနည်းဆုံးအလောင်းအစား အခု ၂၀ မှာ လောင်းကြေးထည့် ကစားရပါမည်။
၄။ ကတ်စတန်မာတစ်ဦးအတွက် ရရှိနိုင်သည့် အများဆုံး ပြန်အမ်းငွေပမာဏမှာ ၁၀ ယူရို ဖြစ်ပါသည်။
၅။ အနည်းဆုံးလောင်းကြေး ပမာဏမှာ ၁.၅၀ ယူရို ဖြစ်ပါသည်။
ဥပမာ 20% cashback အတွက်ဆိုရင် -
၁။လူကြီးမင်းသည် ၃ ယူရိုဖြင့် အလောင်းအစားအခု ၂၀ (‌ လောင်းကြေးစုစုပေါင်း ၆၀ ယူရို ) ဖြစ်ပြီး ယူရို ၄၀ အနိုင်ရသွားတယ် ဆိုကြပါစို့။ ဒီဖြစ်ရပ်မှာဆိုရင် လူကြီးမင်းဟာ ယူရို ၂၀ ရှုံးသွားပါတယ်။ 20% cashback ဟာ ၄ ယူရို ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၂။တူညီတဲ့ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးရဲ့ အလောင်းအစားတွေကို လောင်းကြေးထည့် ကစားထားပြီး ၆၀ ယူရို ဒါမှမဟုတ် အဲ့ထက်များတဲ့ ပမာဏတစ်ခုခု အနိုင်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ပြန်အမ်းငွေ ( cashback ) မှ ရရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၃။ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ငွေပမာဏ တစ်ခုခုရှိမှသာ cashback ပြန် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
* ပြန်အမ်းငွေအားလုံးကို ငွေကြေးမဟုတ်ဘဲ ဘောနပ်စ်အမှတ်များအဖြစ် ထည့်သွင်းပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ *
ပထမဆုံးသွင်းငွေရဲ့ ၁၀၀% ဘောနက်စ်ကို အခုချက်ချင်းပဲရယူလိုက်ပါ။